‘पुरानो बुलेट’ च्यारिटी शो – Mero Film
‘पुरानो बुलेट’ च्यारिटी शो
चैत १ बाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘पुरानो बुलेट’को पथरीमा च्यारिटी शो गरिएको छ । पथरीको कञ्चन फिल्म मन्दिरमा च्यारिटी शो गरिएको थियो । च्यारिटी शोमा फिल्म हेरेका सबै दर्शकहरुले ‘पुरानो बुलेट’लाई राम्रो प्रतिकृया दिएका छन् ।
च्यारिटि शोमा ५ सय दर्शकले फिल्मका नायक, नायीका र निर्देशक, कार्यकारी निर्माता र अतिथिसँगै फिल्म हेरेका थिए । फिल्मको मध्यन्तर पछि फिल्मका मुख्य कलाकार अनुविक्रम शाही, माला लिम्बू र निर्देशक भिषण राई पनि दर्शकमाझ फिल्मको बारेमा प्रष्टाएका थिए ।
पथरी च्यारिटि शोमा समग्र फिल्मले पाएको राम्रो प्रतिकृयाबाट फिल्मका कार्यकारी निर्माता सन्तोष राई चैत १ गतेलाई लिएर उत्साहित रहेको बताए । सञ्चारकर्मी भीषण राईको डेब्यू निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘पुरानो बुलेट’ को वर्लड प्रिमियर शो हङकङबाटपनि उस्तै राम्रो प्रतिकृया पाएको थियो । औपचारीकरुपमा सुरु भएको फिल्मलाई नगरका प्रमुख दिलिप कुमार राईले रिवन काटेर शो को उद्घाटन गरेका थिए ।
फिल्ममा अनुप विक्रम शाही, वर्षा सिवाकोटी, माला लिम्बु, कृष्ण भक्त महर्जन, कविता आले, शिव मुखिया, भारत लिम्बु, शिरोमनी दवाडी, बादल श्रेष्ठ, करण धिताल, अशोक कुमार राई, टिका राम राई लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
फिल्मको कथा–पटकथा निर्देशक स्वयम भिषण र कार्यकारी निर्माता सन्तोष राईले लेखेका हुन् । फिल्मलाई अशोक कुमार राई, दीपेन्द्र लिम्बु, विरेन साम्बा र टिकाराम राईले संयूक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा सन्तोष राई छन् ।
हरि घले लामाको छायांकन, उत्तम जंग लिम्बु र जयन जे. वाइवाको संगीत, राजेशपायल राई, मेलिना राई, जयन जे. वाइवा र उत्तम जंग लिम्बुको गायन रहेको छ । फिल्ममा कोरियोग्राफी प्रसान्त तामाङको रहेको छ ।
२०७५ फागुन २६ गते ११:४१ मा प्रकाशित